Nimbus kubva kuSimbiSeries. MFi Mutongi Ongororo | IPhone nhau
Nimbus kubva kuSimbiSeries. Kuongorora kweMFi controller inopihwa naApple padhuze neApple TV 4
Kana isu tikatenga Apple TV muchitoro chepamhepo tinoona kuti vanotipa zvishandiso zvakati wandei izvo zvinogona kuenda zvakanaka neyedu nyowani set-yepamusoro bhokisi. Pakati pavo pane iyo MFi iri kure SteelSeries Nimbus, Remote inoenderana ne iPhone, iPad, Mac uye Apple TV 4. Nemupiro uyu zvinoita sekunge Apple iri kutiudza kuti ramangwana remitambo yemavhidhiyo chishandiso chatichava nacho mumba yekutandarira uye chishandiso ichi chingave Apple TV Chizvarwa chechina. Zvingave sei zvikasadaro, muActualidad iPhone isu takaisa nzwara dzedu pane mumwe weaya ma controller izvo, zvinofanirwa kutaurwa, zvatisiira kuravira kwakanaka kwazvo mumiromo yedu. Pano une yedu ongorora.
1 Ndeapi michina iyo Steelseries Nimbus inoenderana nayo?
2 Zviri mubhokisi
6 Bhatani kunzwisisika
8 Nimbus app yeIOS
Ndeapi michina iyo Steelseries Nimbus inoenderana nayo?
Iyo Nimbus inoenderana ne:
iPhone 5 kana gare gare.
Chizvarwa chechina iPad kana gare gare.
iPad mini 2 kana gare gare.
iPod touch yechishanu chizvarwa kana gare gare.
MFi SteelSeries Nimbus Mutongi.
Kurumidza Kutanga Gwara.
Izvo hazvisanganise iyo Mheni tambo inodiwa kubhadharisa iyo controller painopera bhatiri.
Sezvinobvumwa, dhizaini iri kushamisa, anodaro mumwe munhu akamboshandisa PlayStation Dualshock kwemakumi emakore. Chinonyanya kushamisa ndeichi mativi maviri anotsigira, asi icho chinhu icho, kana tikangochitora, chinouya chinobatsira. Iyo Dualshock ine rutsigiro shoma ipapo uye, kana isu tine ruoko rakati kurei, iri "kubhururuka" isina rutsigiro nguva zhinji. Kana ari mabhatani, ane zvakafanana nechero yeconsole control nhasi:
Inotungamira crosshead. Wona imwe, tarisa zvese. Iyo yeNimbus inongonzwa yakati siyanei zvishoma, hapana zvirinani, hapana zvakanyanya. Iyo nyaya yekujairira, kunyangwe isiri iyo inoshandiswa zvakanyanya mumitambo mizhinji yazvino.
Zvine zviito mabhatani (A, B, Y uye X). Ivo vari padhuze padhuze kupfuura mune mimwe mirairo, chimwe chinhu icho kune vazhinji chichava chakanaka asi ini ndinofunga iko kukanganisa. Ini ndinofunga inyaya futi yekujairira, asi isu vedu vane zvigunwe zvihombe vachanyatsodzvanya bhatani ratisingade kudzvanya kanopfuura kamwe.
L1, L2, R1 uye R2. Muchiitiko che "2s," isu tinokanganisa zvishoma nezvishoma. Vanoratidzika kunge vakasununguka kwandiri, asi ini handina kukwanisa kuvashandisa chero mutambo nanhasi. Tichafanirwa kumirira uye kuzviedza muShooter.
Analog anonamira. Vane chikamu chepamusoro mukati, icho chinogona kubatsira kuitira kuti minwe yedu isatsvedza. Chinhu chakashata ndechekuti iwo akanyatsotsetseka mune iwo maburi uye izvo zvatinokunda kune rumwe ruoko isu tinogona kurasikirwa nazvo kune rimwe. Kana tikaita zvishoma (zvishoma kwazvo) kumanikidza, zvinoita kunge inomira zvakanaka.
Menyu bhatani, bhatani remagetsi uye bhatani reBluetooth (kana zvikafanira kuibatanidza).
Iyo Nimbus yakavakwa nezvinhu zvakanaka; Haisi mutongi wekutambisa. Iye murume anoraira. Chinhu chega chisinganyatsogonesa kwandiri kupenya kwezvimwe zvikamu. Asi hei, isu hatifanire kunge tiri kutarisa mutongi, kana zvisiri pachiratidziri. Iwo mabhatani, pamusoro pezvose iyo L uye R, zvinoita kunge zvirinani kwandiri kupfuura aya emamwe madhiraivho uye ini ndinofunga zvakafanana nezveaya analogog, kunyangwe ivo vachiita kunge diki kwandiri.
Iwo wekuraira kazhinji unopa zvimwe kunzwa kwehunhu kupfuura vatungamiriri vePlayStation vepamutemo, asi izvi zvinogona kuve zvekuzviisa pasi. Kubva panguva yatinoitora, tinoshamisika nenzira iyoyo, kunyangwe ipapo paine zvinhu zvinogona kutiita kuti tinzwe kushamisika. Ndiri kutaura nezve makuru mabhatani, iyo yepamberi musoro uye mabhii eanalog, chimwe chinhu chandinofunga chakajairika pese patinoshandura pfundo. Kana tikangotora ndokuisa maoko edu munzvimbo yekutamba, tinoona kuti iri robust knob Iyo yakakosha zvakaringana sechero chero rakakurumbira dhairekita controller, kunyange hazvo mhando ichibhadharwa.
Iyo Nimbus, sezvandakambotaura pakutanga, ndeyekuraira ishe. Izvo zvinosanganisira kunzwisisika kwemabhatani. Ndakaedza kutamba zvinyaradzo zvekare (zvakateedzerwa paMac) uye maGeometry Hondo 3, semuenzaniso, uye iwo analog anoshanda zvine mutsindo. Dambudziko randinoona nderekuti ivo vakaomarara, saka kana tichida kufamba zvishoma nezvishoma tinofanirwa kujaira kuraira. Kune zvese zvimwe zvinhu, zvakakwana.
Steelseries inovimbisa kuti iyo Nimbus ichave ne kuzvitonga kweanopfuura maawa makumi mana (Tichaona). Izvo zvakapetwa katatu chiyero cheiyo Dualshock 4, iyo inonzi munguva pfupi. Tinogona kupedza mazuva angangoita maviri akateedzana tichitamba pasina kubhadharisa maNimbus. Kubhadharisa zvinoitwa netambo yeMheni, iyo isingauyi mubhokisi asi isu tinogona kushandisa iyo yeipi iPhone 5 kana gare gare kana iPad 4 kana gare gare.
Nimbus app yeIOS
Iko kune kunyorera muApp Store kuti uperekedze yedu Nimbus. Iko kunyorera kunotibatsira isu kugadzirisa iyo firmware yeNimbus, semudzidzisi uye kuziva kuti ndeapi mitambo aripo muApple Chitoro iyo inotsigira MFi zvinodzora, izvo zvakanaka kwazvo, hongu.
Tinogona kutenga SteelSeries Nimbus kubva kuApple Store (pano padandemutande) ye mutengo we 59,95 €. Iwo wakawedzera kana kushoma mutengo wekuti isu tinogona kutenga mamwe ane mukurumbira macomputer macontroller, asi ini ndinofunga zvakati kurei kuushandisa pane iOS neMac zvishandiso.Handirambe kuti mune ramangwana ichave nemitambo yakawanda inowanikwa uye iyo mutengo waro uchave wakanaka, Asi izvozvi zvinoita kunge zvinodhura kwandiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Nimbus kubva kuSimbiSeries. Kuongorora kweMFi controller inopihwa naApple padhuze neApple TV 4
Ndine urombo kukuudza kuti hauzive zvauri kutaura nezvazvo. Mira kuenzanisa uyu mutungamiriri neiyo Playstation kana iri kopi yakajeka yeXbox imwe, iyo nenzira ndiyo mutungamiriri akanakisa kutamba.
Dhizaini yacho ichave inoshamisira kumunyori, uyo asingazombotora imwe yeX360 kana XOne, nekuti kune kubiridzira mukugadzira….
5 manomano ekuva nyanzvi neApple TV
Chekutanga screenshots inoratidza zvichave zvakaita WhatsApp mune ramangwana (Vhidhiyo foni?)